Kukwira naHwindi Mukombi – Vanoda Zvinhu
Varumewo Ndakanakirwa neMBORO. Ndinoverenga mastories evanhu vazhinji vanotaura zvesviro saka nhasi i decided to share mine yekusvirwa naHwindi mutinted Kombi pana4th MuHarare.
Ndakanyengwa naHwindi one day ndichipinda muTown going to work. Ndakabvuma ndikati no worries sezvo ndaiziva kuti kukwira Kombi mahara everyday. Handina kuziva kuti that meant ini wacho zvakare kusvirwa muKombi. He sent me App one day akati anoda kundiona in private so we can get kumbokisana so i said it was fine chandisina kuziva is private yacho is muKombi make.
Ndakashanda half day ndokuuya kuna 4th ndikamuona akati lets go for a ride ndikabvuma. Takapinda muKombi ndokubva driver aenda pasi peMuti opposite Roadport. Akabva aburuka ndokusiya ini naHwindi tirimo. Ndaive ndine kaMini Skirt kangu nekatight tank Top, mazamu angu nekukura ayiita kunge achabuda panze. Kombi Driver achingobuda chete Hwindi akabata makumbo angu anga akaita TAN ndokutanga kupuruzira achinanga kubeche rangu. Ini nenyere dzangu ndakanga ndakutofemera pamusoro.
Hwindi akaoperator ruoko rwake panyini yangu kunge munhu arikuoperator door reKombi. Pasina nguva ndanga ndakuderera nekutunda same time. Akasimudza kamini skirt kangu ndokubvisa panty yangu nguva yese iyi maziso angu were closed, ndakamavhura maziso ndokuona vanhu vaifamba very close to the Kombi excitement yacho yakabva yakwira ndokutanga kutunda asinga kana kumbondibata. Hwindi akabvisa short rake and pasina maseconds anga atondisvira nenyoro. Ndakatunda instantly… Hwindi ivavo vaive neTalent yemboro.
Hameno kuti sei tisina kubatwa, hongu Kombi yaive neTint asi pace yaifamba naHwindi yayiita kuti Kombi ishake. Vakakwidza pace ndokutundira mukati mangu ndakaita kunge ndadirwa mvura munyini nekuwanda kweSp-erm racho. Pavakapedza Hwindi vakangoti “babe zvanhasi zvaita, totamba mangwana maWarriors akabaiwa!”. Akatanga kupfeka ndokunditambidza tissue. Ndakapukuta ndokugadzirisa skirt asi mukati mangu ndainzwa kuti makazara. Ndakabva ndakumbira kuendeswa kumba kuMandara ndokubva ati ok. Akaburuka ndkudaidza driver ndokundiendesa kumba, ndakapepuka ndichisvika pamba ndokuenda ndokunorara hangu mumba.
Next story Zvandakazoitwa nekamwana ka Landlord ka muForm Six
Previous story Kubonyoreswa namaiguru, sisi vemukadzi